Galmee Waliin Madaali
Galmee, ammee filatu waliin walmadaalchisi. Qabeentooni galmee filatamanii akka haanqiinsaatti qaaqa banu keessa filatamaniiru. Yoo barbaadee qabeentoota faayilii filatamanii galmee amee keessaa galfatoota mijaawaa filuudhaan Dhiisii cuqaasi, ittaansuudhaan Saagi cuuqasuun Saaguu ni dandeessa.
Jijjiiramoonni garagalchawwan galmee walfakaataa kan galmee xabboo keessaa alaalga. Jijjiiramoonni milijaleewwan matadureewwan goodayaawwani fi dirreewwan irattitasifaman gatamaniiru. Jijjiiramoonni walfakaatan ofumaan makamani